Roohi (2021) – MM Subtitles
Mar. 11, 2021India134 Min.PG
7.9 10 votes
ဘော်ရာပန်ဒေးနဲ့ ကတ်တန်နီတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ ဘဂါပူရ်ဆိုတဲ့ မြို့ငယ်လေးတစ်ခုက သတင်းထောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘေးပန်းအလုပ်အနေနဲ့ သတို့သမီးပြန်ပေးဆွဲတဲ့အလုပ်လဲ လုပ်ကြပါတယ်။
သတို့သမီးပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီမြို့မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးရှိရင် လိုက်ပိုးစရာမလိုပဲ သူတို့ ကုမ္ပဏီကို အလုပ်အပ်လိုက်ရင် သူတို့ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုပြန်ပေးဆွဲလာ အပြီးအစီး အိမ်တိုင်ရာရောက်အပ်ပေးလိုက်ပြီး အိမ်ရောက်တဲ့အခါ သတို့သားဘက်က တင်တောင်းမယ့်ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေနဲ့ချုပ်လိုက်ရင် မိန်းကလေးက သဘောတူလက်ခံပေးလိုက်တာမျိုးပါ။ အစဉ်အဆက်လက်ခံလာတဲ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေပြီးအခုလက်ရှိခေတ်မှာ ဥပဒေနဲ့မညီဘူး ဘာညာပြောကြပေမယ့် ဘယ်သူမှလဲ ထူးထူးခြားခြားကန့်ကွက်ကြတာမျိုးမရှိကြပါဘူး။
တစ်နေ့တော့ သူတို့ပြန်ပေးဆွဲပေးရတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်မယ့်သတို့သား အိမ်မှာနာရေးဖြစ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာပွဲရွှေ့ဆိုင်းထားရပြီးတစ်ပတ်လောက် အဲ့ဒီမိန်းကလေးကို တောနက်ထဲက သစ်စက်ဟောင်းတစ်ခုမှာ စောင့်ရှောက်ထားရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ မသိခဲ့တာက အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာ မူဒီယာပယ်ရီဆိုတဲ့ အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ခြေကလိန်မျိုးစုန်းမရဲ့ ပူးကပ်မှုကိုခံနေရပြီး တစ်ချက်တစ်ချက်ကျရင် အဲ့ဒီစုန်းမဝင်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာပဲ ဘော်ရာက ပူးကပ်ခံ မိန်းမလှလေးကိုချစ်မိပြီး ကတ်တန်နီကတော့ ဝင်လာတဲ့စုန်းမကို ချစ်မိသွားပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ရှုပ်နဲ့တကွမိန်းကလေးရဲ့ စုန်းပူးကပ်တဲ့ ပြဿနာ၊ သူတို့ရဲ့ ဘော့စ်ဂန်းစတားကြီးနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့သတို့သား စတဲ့ ပြဿနာတွေကို အလွဲလွဲအချော်ချော်ကြားက ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို ဟာသတွေအပြည့်နဲ့မြင်တေ့ွရပါလိမ့်မယ်။
Stree ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Stree အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ထပ် Horror/Comedy လက်တွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စုန်းမပူးကပ်ခံနေရတဲ့ မိန်းမလှလေး Roohi အဖြစ် မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့အချစ်တော် ကွယ်လွန်သူမင်းသမီးကြီး စရီးဗ်ဒေဝီရဲ့ သမီး Janhvi Kapoor သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Format……….: .mp4 & .mkv
Resolution….: 4K, 1080p 5.1CH, 720p, 480p
Duration……..: 2h 14min
Original title रूही
IMDb Rating 4.6 3,387 votes
TMDb Rating 5.73votes
MMSubtitles ကို သဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား?
သဒ္ဒါတရား နည်းများမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီ
Donate ရန် နှိပ်ပါ
Download 🔥 4K ⚡Fast Drive 5.42 GB
Download 🔥 1080p 5.1CH ⚡Fast Drive 2.11 GB
Download 720p ⚡Fast Drive 884 MB
Download 480p ⚡Fast Drive 507 MB
Download 🔥 4K G Drive 5.42 GB
Download 🔥 1080p 5.1CH G Drive 2.11 GB
Download 720p G Drive 884 MB
Download 480p G Drive 507 MB
Download 🔥 4K Solid Drive 5.42 GB
Download 🔥 1080p 5.1CH Solid Drive 2.11 GB
Download 720p Solid Drive 884 MB
Download 480p Solid Drive 507 MB
@ 2020 MMSubtitles - IMPORTANT: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
ဇာတ်ကားအသစ်များကို www.ShweFlix.com မှာ ဆက်လက်တင်ပေးနေပါတယ် Go to www.ShweFlix.com